Lafta Gareen oo ku guuleystay Doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed – Kalfadhi
Lafta Gareen oo ku guuleystay Doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed
December 19, 2018 December 19, 2018 Kalfadhi
Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, ayaa kusoo baxay Wareegga Koowaad ee doorashadda Maamulka Koonfur Galbeed, waxaana uu helay codad dhan 101 cod, sida ay xaqiijiyeen Guddiga Doorashada Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed.
Waxaa Kaalinta Labaad galay Musharrax Aadan Maxamed Nuur Saransoor oo helay 22 cod oo kaliya, waxaa doorashada kula tar tamayay ilaa Afar Musharrax oo kala ahaa Xuseen Cismaan Xuseen, Aadan Maxamed Nuur Saransoor, Ibraahim Macalin Nuunow iyo Sayid Axmed Sheekh Daahir.
Inta ay socotay codaynta 147 Xildhibaan ee Baarlamaanka Koofur Galbeed, waxaa halaabay codad 10 kabadan, oo dhamaan loo calaamadeeyay si qaldan, waxa ayna Guddiga Doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed ay sheegeen in codadka laga calaamadeeyay qaybta kore ee masawirka, taas oo ay ku qanceen wakiillada codadka u qabanayay shanta musharrax.
Markii lagu dhawaaqay natiijadda doorashadda, waxaa makaroofanka looga yeeray musharraxa helay codka labaad ee ugu badnaa, Aadan Saransoor, waxa uuna sheegay in uu ku qanacsan yahay sida ay u dhacday Doorashada Madaxweynaha Konfur Galbeed. “Waxaan u hambalyeynayaa Madaxweynaha cusub ee Koofur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-Gareen), oo ku guulaystay doorashadii xalaasha ahayd, waana la shaqayn doonaa” ayuu yiri Musharax Aadan Saransoor.
Madaxweynaha cusub ee Konfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-Gareen), oo hadal kooban ka jeediyay goobta doorashada, ayaa aad u amaanay Guddiga Doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed. “Waxaan amaan u soo jeedinaya Gudigga Doorashada Koofur Galbeed iyo Kusimaha Madaxweynaha Koofur Galbeed shaqadii wanaagsanayd ee ay qabteen, doorasha dhacday waxa ay ahayd mid Xor iyo Xalaal ah” ayuu yiri Madaxweynaha cusub, Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-Gareen.
Madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-Gareen) ayaa, sidoo kale, u mahad celiyay musharraxiintii 4-ta ahayd ee la tartantay. “Waxaan u mahad celinayaa saaxiibada ila tartamay, gaar ahaan waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa Musharrax Aadan Saransoor, oo ahaa Musharraxa igu soo xigay; ujeedka maahan in uu guulaystay qof gaar ah, laakiin waan wada guulaysanay” ayuu yiri Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-Gareen).
Doorashadda Konfur Galbeed waxaa goobjoog ka ahaa Xubno ka socday Golayaasha Dowladda, sida Wasiirro, Xildhibaanno labada Aqal ah iyo marti kale, waxaana si wayn uga dhex Muuqday Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya, Cabdi Maxamed Sabriye.
Xildhibaanno ku kala aragti duwanaaday soo bixistii Madaxweyne Lafta Gareen